Iindaba -Iindidi zezinto zokwakha zesinyithi
I-Arbon-manganese steels: Ezona zinto ziphambili zeekhemikhali ziyintsimbi, icarbon kunye nemanganese. Ezi zihlala zibizwa ngokuba zii-steels ezinobume obucekeceke okanye i-carbon steels. Amandla kunye ne-ductility aphezulu, kwaye ukuba noqoqosho kusetyenziswa ngokubanzi. Udidi oludumileyo phakathi kolu hlobo lubakala lwe-ASTM A36.
Iimilo ezikhoyo zichazwe kwimigangatho emininzi epapashiweyo kwihlabathi liphela, kwaye inani leengcali kunye namacandelo eminqamlezo obunini ziyafumaneka.
I-beam yesinyithi, kule meko isetyenziselwa ukuxhasa ukudityaniswa kwamaplanga endlwini.
I-beam (I-cross-section-shaped-british) eBrithani ezi ziquka ii-Universal Beams (UB) kunye ne-Universal Columns (UC); eYurophu iquka i-IPE, HE, HL, HD kunye namanye amacandelo; e-US iquka i-Wide Flange (WF okanye W-Shape) kunye no-H amacandelo)
Uhlobo lwe-Z-Shape (isiqingatha seflange kwicala elichaseneyo)
HSS-Imilo (Ulenze icandelo candelo eyaziwa ngokuba SHS (icandelo kwesakhiwo kumngxuma) kwaye kubandakanywa isikwere, okoxande, setyhula (umbhobho) kunye namacandelo emnqamlezweni elliptical)
I-Angle (icandelo eli-L elinemilo enqamlezileyo)
Ijelo lolwakhiwo, okanye i-C-beam, okanye icandelo le-C
Itey (icandelo elinomilo o-T)
Iprofayile kaloliwe (i-boram engalinganiyo)
Umgaqo kaloliwe oshushu
Ibha, isiqwenga eside esinecandelo lomnqamlezo elixande, kodwa hayi libanzi kangako ukuze kubizwe iphepha.
Intonga, isangqa okanye icandelo lesikwere ixesha elide xa kuthelekiswa nobubanzi; jonga kwakhona i-rebar kunye nedowel.
Iplate, amaphepha esinyithi angaphezulu kwe-6 mm okanye 1⁄4 ngaphakathi.
Ngelixa amacandelo amaninzi enziwe ngokuqengqeleka kushushu okanye kubanda, amanye enziwe ngokudibanisa kunye iipleyiti ezithe tyaba okanye ezigotyiweyo (umzekelo, awona macandelo makhulu asetyhula enzelwe ipleyiti ethe tyaba egobile ibe sisangqa kunye nomphetho wentsimbi).
Amagama e-angle yensimbi, isinyithi sesitishi, kunye nesinyithi yentsimbi ziye zasetyenziswa ngokufanayo ukusukela ngaphambi kokuba intsimbi yenziwe endaweni yentsimbi ngeenjongo zorhwebo. Baye baphila emva kwexesha lesinyithi esenziwe ngentengiso kwaye ngamanye amaxesha beva nanamhlanje, ngokungacwangciswanga, ngokubhekisele kwisitokhwe se-engile yentsimbi, isitokhwe sesitayile, kunye nephepha, ngaphandle kokungazichazi amagama (thelekisa "i-tin foil", ngamanye amaxesha isetyenziswa ngokungacwangciswanga Ifoyile yealuminium). Ukubhala ngokusesikweni kwimeko yokusebenza kwesinyithi, amagama achanekileyo anje ngestokhwe se-engile, isitokhwe sesitayile kunye nephepha ziyasetyenziswa.